Aqalka Sare oo ka doodaya Qadiyadda Qalbidhagax, Go’aan noocee ayeey qaadan karaan,? – Hornafrik Media Network
Aqalka Sare oo ka doodaya Qadiyadda Qalbidhagax, Go’aan noocee ayeey qaadan karaan,?
By HornAfrik	 Last updated Sep 10, 2017
Shir ay yeesheen Guddiyadda Joogtadda ah ee Aqalka Sare oo uu Gudoominayay, Gudoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi ayaa looga dooday sida laga yeelayo arrinta Qalbidhagax iyo Go’aanka Xukuumadda ay ku dhiibtay Muwaadinkaasi Soomaaliga ah.
Shirkaasi kadib ayuu Gudoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi u sheegay Iddaacada Goobjoog in loo gudbinayo Fadhiga ugu horeeyay Aqalka Sare Qadiyadda Qalbidhagax, Wuxuuna sheegay in Ajandaha ugu horeeyay ee laga doodayo ay arrintaasi noqon doonto, iyadoona Fadhiga Aqalka Sare uu yahay Bari oo Isniin ah.
Cabdi Xaashi waxa uu sheegay inay u taalo Aqalka Sare siday u arkaan sax iyo qalad Go’aankii Xukuumadda Somalia ay ugu dhibtay Itoobiya, muwaadinka Soomaaliga ah ee lagu magacaabo C/kariin Sh Muuse Qalbidhagax.
Aqalka Sare ayaa la aaminsan yahay ka doodistiisa arrintan inay keeni karto in halkaas ay ka billaabato Mooshin ka dhan ah Madaxwayne Maxamad C/lahi Farmaajo, maadaama uusan Aqalka Sare door ku lahayn Mooshin ka keenista Xukuumadda Sharci ahaan, balse waxay awood u leeyihiin inay ka keenaan Mooshin Madaxwaynaha.
Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ayaa si isku mid ah uga doodi doona Qadiyadda Qalbidhagax oo ah Muwaadin Soomaali ah oo 27 Kii Bishan loo gacan galiyay Dowladda Itoobiya, taasoo ay ka dhalatay Carro badan. Waxaana ay Golaha Shacabku arrintan ka doodi doonaan Arbacadda, sida xogta ay ku heshay HornAfrik.
Gaari Wasiir oo lagu weeraray Dharkeenleey, Maxaa Khasaare ah oo ka dhashay,?
Xildhibaano faro badan oo Maanta Muqdisho ku soo laabtay, Maxay ka dhigan tahay soo laabashadooda,?